Apple megharịrị peeji nkwado ya na ihu dị mfe | Esi m mac
Ibe nkwado Apple na-enweta redesign zuru ezu
Fraịde a, akwụkwọ nkwado Apple na-arụzigharị usoro zuru ezu na nnweta dị mfe, nke pụtara na ọ dịkwa Isiokwu ndị a dị mfe nnweta na njikọ ya na ebe nrụọrụ weebụ na-akwado desktọọpụ na nsụgharị mobile.
Apple kwuputara nke a site na akaụntụ Twitter ya nke ndị ọrụ na-agba ume ịchọgharị na ya mkpokọta "a nwalere ma degharịa". Na mgbakwunye na mmụba anya nke anyị na-ahụ oghere ọcha ndị ọzọ na n'ikpeazụ karịa n'usoro ma ka mma ile anya, ugbu a ị nwekwara ohere dị mfe ma dị mfe na nchekwa data agbakwunyere nke isiokwu enyemaka, na-ekelekarị n'eziokwu na agbakwunyere ha ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke njikọ ọsọ ọsọ.
Njikọ ndị a na-eduga kpọmkwem na ibe ngwaahịa, ya bụ, maka iPhone, iPad, Mac ma ọ bụ usoro ngwaahịa ndị ọzọ. Ọ dịkwa mkpa ịkọwa ngalaba ọhụrụ "Isiokwu Ndị Mara Mma", ugbu a ngalaba a nwere isiokwu ndị dị ka njikwa Apple ID, Ihe Ọhụrụ maka iPhone ma ọ bụ otu esi ewere ma jikwaa foto gị. Akụkụ a na-enye ohere gosipụta ihe ndị dị ugbu a nke ahụ nwere ike ichegbu onye ọrụ ahụ na ịpị nke ọ bụla n'ime ha na-eduga anyị na peeji ndị agbakwunyere na-eduga na njikọ akwụkwọ ndị adịlarị na peeji nkwado ahụ ogologo oge.
N'aka nke ọzọ, oghere dị maka Apple Nkwado Oha obodo, ngalaba na ọnọdụ nke akwụkwọ ikike na mmezi nke ngwaọrụ ahụ, kọntaktị nkwado dị iche iche, njikọta na Twitter na ọzọ iji hụ ebe obibi dị na Storelọ Ahịa Apple.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » Ibe nkwado Apple na-enweta redesign zuru ezu
Etu esi ebubata ndepụta ọkpụkpọ Spotify gị na Apple Music
Etu esi edegharị otutu faịlụ otu oge na OS X El Capitan